Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Aostralia » Aostralianina mandeha avy any India no raisina ho toy ny olon-dratsy
Aostralianina mandeha avy any India - nahazo alalana tamin'ny AP Rafiq Maqbool
Manomboka ny Alatsinainy 3 Mey 2021, ny mponina ao Aostraliana sy ny olom-pirenena dia mety hiatrika lamandy sy fotoan'ny fonja raha misafidy ny handeha hody avy any India voadonan'ny COVID mafy izy ireo.
Rehefa niakatra ny isan'ny tranga COVID tany India, dia nametraka paikady fitsangatsanganana vaovao ho an'ny olom-pirenena sy ny mponina manandrana mody mody any Aostralia.
Fanambarana vonjimaika no nambara omaly izay manomboka manomboka ny alatsinainy 3 mey.
Ny sasany miantso ny hetsika ho fanavakavaham-bolon-koditra sy mahatezitra.
Ity "famaritana vonjimaika" vonjimaika ity izay navoaka ny zoma lasa teo no fotoana voalohany nanaovan'i Aostralia ho heloka bevava ny fodian'ny olom-pireneny hody. Izay mponina na teratany aostralianina manandrana miverina avy any India dia voarara tsy hiditra amin'ny fireneny ary mety hiatrika lamandy sy fotoana an-tranomaizina ihany koa.
Ity hetsika ity dia ampahany amin'ny fepetra henjana hampiatoana ireo mpandeha mankany Aostralia amin'ny firenena faharoa be mponina indrindra manerantany satria miatrika fitomboan'ny tranga COVID-19 sy ny fahafatesany.
Nanambara ny minisitry ny fahasalamana Greg Hunt fa na iza na iza manohitra ny lalàna vaovao dia homena lamandy hatramin'ny 66,600 dolara aostraliana (51,800 XNUMX $), dimy taona an-tranomaizina, na izy roa ireo, hoy ny tatitry ny Associated Press Australia.
"Tsy mandray fanapahan-kevitra maivana ny governemanta," hoy i Hunt tamin'ny fanambarana iray. "Na izany aza, zava-dehibe ny fiarovana ny tsy fivadihan'ny rafitra fahasalamam-bahoaka any Aostralia ary arovan'ny rafitra quarantine ary mihena ny isan'ireo tranga COVID-19 any amin'ny toeram-pitrandrahana quarantine."